Radioactivity: ihe ọ bụ, njirimara, ụdị na ojiji | Netwọk Mgbasa Ozi
La ihe ngosi redio Ọ bụ ihe onwunwe ụfọdụ ihe nwere nke na-agbanye ume na gburugburu ebe obibi. Ọ na-egosipụtakarị dị ka akwara subatomic n'ụdị radieshon electromagnetic. Dabere na ebe ị nọ na akpa electromagnetic, ọ nwere ike ịdị elu ma ọ bụ dị ala radieshon. Nke a bụ ihe ịtụnanya sitere na enweghị ike nuklia na nuklia nuklia.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, ụdị na mkpa nke redioactivity.
2 Ngwurugwu redio na artificial
3 Ofdị redioactivity
3.1 Alpha radieshon
3.2 Beta radieshon
3.3 Gamma radieshon
3.4 Ọpụpụ Neutron
4.2 Ọrụ sayensị na agụmakwụkwọ
4.3 ụlọ ọrụ
Otu ala na-agbanwe agbanwe nke sitere na redioaktivu na-emebi. N'oge mmebi ndị a enwere ikuku nke redioactivity ruo mgbe o ruru nkwụsi ike ya. Igwe ikuku redio nke nwere ọdịnaya dị ike, nke na-enye ike dị ike nke nwere ike ịmetụta ihe ndị na-aza ha.
E nwere ọtụtụ ụdị redioactivity na-adabere na nnabata ya na njirimara ya. N'otu aka, anyị nwere redioactivity nkịtị, nke bụ ihe a na-ahụ n'enweghị enyemaka mmadụ. N'aka nke ọzọ, nrụrụ aka redio bụ nke mmadụ na-eme site na enyemaka ya. Nke mbụ a na-ahụkarị ya n'ụzọ nkịtị na redioisotopes. Nke abụọ abụrụ artificial radioisotopes na ihe di egwu. Imirikiti redioisotopes na-adịkarị adị adịghị njọ, yabụ enwere ike iji ya rụọ ọrụ ahụike. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere carbon 14 na potassium 40. Igwe redio ndị a bara uru maka ịme ihe na mkpakọrịta nwoke na nwanyị.
Ọ bụ ezie na ọrụ redio nwere ọtụtụ ngwa maka ụmụ mmadụ, ọ na-enwekwa mmetụta na-emerụ ahụ nke nwere ike iduga ọnwụ. Ọ bụrụ na ọgwụ radieshon nke mmadụ natara dị elu, ohere nke mgbanwe a na-achọghị ma ọ bụ ọrịa kansa na-abawanye ụba.
Ngwurugwu redio na artificial
Ngwurugwu sitere n'okike nwere ihe ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe. Dika nuclei enweghi ike zuru oke, ha na-aghapu onwe ha ma zere ihe omuma. Ihe ndị dị n’ime ala, ikuku na ihe ndị sitere n’eluigwe na-anọchi anya ya. Kacha nkịtị bụ ndị na-esonụ: uranium-238, uranium-235, carbon-14, uranium-235, na radon-222.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere redioaktivu aka. Ihe mejuputara ya bu ihe otutu ihe omimi redio nke emeputara na ndi nyocha. Ihe a ga - eme bụ bọmbụ nke ihe ndị na - enweghị redio nwere ihe ndị dị ka helium atom iji nwee ike ịgbanwe ha n'ime isotopes redio. Ihe onyonyo na-emetụta ihe omimi nke ala mekwara ka akụ na ụba weta n’elu bụ igwuputa ihe na mmanu mmanu. A na-ahụta ha dị ka ihe aka ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịdị n'elu ụwa.
Otutu ihe mmekorita mmadu mere bu ihe kariri ihe ndi ozo. Nuclei nke ihe ndia na emebi ngwa ngwa inwe ike sitere na ihe ndi ozo.
Ozugbo anyị kewara ihe bụ ụdị dị iche iche dị iche iche dabere na mbido ha, anyị ga-ahụ ụdị ụdị ọrụ redio dị na-adabere na njirimara ha.
O bu irighiri ahihia nke na-eweputa ahihia. Ihe mejuputara ha bu proton abuo na neutron. Ya mere, a na-ewere mkpụrụ ọgwụ alpha dị ka atom ice atom gba ọtọ kpamkpam n'enweghi electron ọ bụla. N'ihi na ọnụnọ nke proton abụọ na ntọala nke atọm, mkpụrụ akwụkwọ alpha nwere ụgwọ dị mma. Alfa radieshon ma ọ bụrụ na ị hụrụ ma kwupụtara na ọ dị obere ịbanye na na-akwxrx n by ime akwxkwx nzimozi. Ọ na-adịkarị obere ikuku. Ihe atụ ụfọdụ nke atọm ndị na-ewepụta radieshọn mkpụrụ bụ uranium-238 na radium-226.
Radiationdị radieshon a bụ ionizing ma nwee ikuku dị ihe dị ka otu mita. Enwere ike ịkwụsị ya site na mpempe akwụkwọ aluminom. N’oge ihe nrụrụ mbibi nke redioaktivu, a na - ezipụta elektrọn site n’ positron. Ha abụọ sitere na nuklia. Nke a bụ ya mere e nwere subtypes abụọ nke beta radieshon: beta + na beta -. Nke mbụ bụ n'ihi nsị nke elektrọn nke mbido nuklia na ụgwọ dị mma yana nke abụọ na emission nke elektrọn nke nuklia na neutron nke gbanwere proton.
Ọ bụ radieshon nke akpa akpa. Ọ bụ ebili mmiri dị ike ma na-abanye n’ime nanị ihe na-eduga. Ike ikike a na-enye ohere iji ya mee ihe n'ụdị cobalt-60 na ọgwụgwọ ọrịa kansa na ebe miri emi n'ime ahụ.
Ọ bụ ụdị redioactivity na-abụghị ihe na-eme ka mmiri kwụsịtụ karịsịa. Ihe dị mkpa nke radieshon a bụ na ọ nwere ike ịgbanwe ihe ndị na-enweghị redioaktivu n'ime ndị ọzọ.
Anyị ga-ahụ ụdị ngwa redio ọrụ nwere n'ọhịa mmadụ.
A na-eji isotopes redioactive na ọgwụ maka ọgwụgwọ na nyocha. Ọtụtụ n'ime ha na-eje ozi dị ka ndị na-achọpụta ihe iji chọpụta nchoputa nke otu ọrịa ebe ọ bụ na ha nwere otu njirimara ahụ dị ka atom nke ihe ndị na-abụghị redioị. Ọmụmaatụ, a na-eji ayodiin-131 eme ihe na ọgwụ iji chọpụta mbupụta obi na oke plasma. Otú ọ dị, ngwa kachasị mkpa nke ihe redio a bụ iji tụọ ọrụ nke gland thyroid. Nke a bụ n'ihi na homonụ ndị na-ebunye ayodiin dị na gland thyroid.
Ọrụ sayensị na agụmakwụkwọ
A na-eji ihe eji arụ ọrụ redioji amata ihe mejupụtara mmanụ na anwụrụ ọkụ. N’ọmụmụ ihe mgbe ochie dị iche iche, a na-eji ọrụ nke carbon-14 amata afọ nke ụfọdụ fosil. N'ihi isotope a nke na-eme na mbara igwe, anyị nwere ike ịde ma mara akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị. Ma nke ahụ bụ a isotope na-etinye naanị ndị dị ndụ.
A na - eji ya eme ihe eji azacha ọgwụ, nri na arịa ndị nwere ya. Enwere ike iji ya maka nhazi akwa, ihe eji esi nri, ndị na-ahụ maka redio, mmanụ mkpochapụ gas dị ka sọlfọ dioxide na nitrogen oxides, wdg.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere redioactivity na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mgbasa ozi
Akọrọ oké ifufe